Makiyi ekutanga kuisa mari mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Mazano ekutanga kuisa mari mumusika wemasheya
Ehezve, varimi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari vanozove nematambudziko mashoma chiteshi mari yako nenzira kwayo pamusoro pemwedzi mishoma inotevera. Ndizvozvo chaizvo avo vasina kuisa mari yavo mumisika yemari iyo ino chinyorwa chakanangwa. Nechinangwa chikuru chekuti ivo vari mumamiriro akanakisa kuchengetedza kwavo kuchengetedza kwehupenyu. Uye kana zvichikwanisika nemazamu capital kuwana zvinogoneka, kunyange hazvo izvi zvichitoenderana nezvinhu zvakawandisa uye kuti zvenguva iyoyo hazvizobatwe kuti titarise pachikamu chakakosha chemusika wemusika.
Kutanga, hapana mubvunzo kuti ivo vari ivo chaivo vanotanga muhomwe vashandisi vanogona kuita zvikanganiso zvakawanda mukuita kwavo mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti maeuros akawandisa anogona kusiiwa munzira uye ichi chinhu chinofanirwa kudzivirirwa pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi. Aya matipi anovavarira, izvo zvinozovabatsira kuti vagadzirise zvirinani mashandiro emusika wemasheya. Nemaitiro akapusa ekuti zviite zvinonzwisiswa nemunhu wese kubva pakutanga.
Kunyanya mumisika dzenyika dzese dzinozove yakanyanyisa kugadzikana kubva zvino zvichienda uye kupi chenjedzo inofanira kuva yavo huru dhinomineta. Nekuti zvichave zvakaoma kwazvo kune masisitimu mumusika wemasheya kudzoka kuzopa zvakanakisa mhedzisiro yemakore apfuura. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vari kuzofamba kuburikidza yakaoma zvikuru nharaunda. Iko varimi vane ruzivo rwakaderera mukutengesa masheya ndiko kuchanyanya kurohwa kana maitiro akajairika asiri ekuwedzera. Sezvazvakaitika zvirinani kubvira gore ra2013, uko kuwedzera kuri kuwedzera mumisika yepasi rese yemasheya kwave kuri kuratidza kwechokwadi kwemisika yemari.
1 Makiyi evatsva mari
2 Chekutanga chinangwa: usatarisira zvishamiso
3 Chinangwa chechipiri: dzidza
4 Chengetedza mari yausingade
5 Ita zvinangwa zvishoma
6 Kuchengeta makotesheni
Makiyi evatsva mari
Mukati meichi chirevo chizere, varimi vane ruzivo rwakashoma mumisika yequity vanoita kudaro. vanogona kuwedzera kubva kota yechina neyekupedzisira yegore. Nekuti mukuita, kana iwe ukaita akateedzana ezviito, yako nzvimbo yekudyara ichave yakanyatsoita basa kuitira kuti yako yazvino account balance iwedzere zvishoma zvishoma. Uye nenzira iyi kuti ndikwanise kunakidzwa neiyi capital capital yekuzvibatsira ivo pachavo. Ndokunge, shure kwezvose, chinangwa chekufamba kwako, chero chinhu chemari chakasarudzwa kuita chero chiito mumisika yemari.
Kubva pane iyi nzira yekutanga, richava basa iro hazvizovi nengozi Uye zvinogona kudaro kuti pane imwe nguva kana imwe iyo hazvizo kukura sekufunga kwako kubva pakutanga. Nekudaro, iyo yekuwedzera kiyi ichave yekuti zano iri rinogona kuitwa riine yakanaka dosi yechirango. Ichi chichava chinhu chinozopedzisira chaona kuti mhedzisiro yekuvhiya yagadziriswa nechiratidzo chakanaka. Chichava chakanakisa chezviratidzo zvekuti iwe wakakwanisa kuzadzisa zvinangwa zvako munyika inogara iri yakaoma yekudyara.
Chekutanga chinangwa: usatarisira zvishamiso
Yekutanga yematanho inofanirwa kuve yakanangana nekusapfuma mumazuva mashoma. Hazvishamise kuti zano iri rinogona kukutungamira iwe ita zvikanganiso zvakawanda pane zvinotarisirwa kune muzvinashawo ane ruzivo mune misika yemari. Asi, kuisa mari kunofanirwa kuvakwa pakubatanidza kushivirira kudiki uye rimwe zano. Kuzvidya mwoyo haisi shamwari yakanaka yekufamba kune vashoma nevapakati varimi Mienzaniso inopfuura imwe inogona kupupura kwauri mukutsigira iyi tsika, umo dzimwe shamwari dzako dzepamwoyo dzinogona kuwanikwa.
Kune rimwe divi, iyi sisitimu yekudyara yakajairika muvanhu vazhinji inogona kutungamira kumagumo zvekuti iwe unokanganisa chikamu chakanaka chemhuri yako kana chako pachako zvinhu. Nekuti mune iyi pfungwa, kushuvira kunogona kuva imwe yevavengi vako vakuru kubata mari yese yaunofanirwa kushandisa mukudyara. Panzvimbo iyoyo, kungwara uye njere dzinofanirwa kukunda pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga. Ichi chinhu ndechimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nekukurumidza zvakanyanya kana iwe usiri kuda kuita zvikanganiso zvakakura.
Chinangwa chechipiri: dzidza
Hapana imwe nzira irinani yekuita mari ine mari pane kuziva zvirinani zvese zvinoitika nenyika yemari. Kune izvi hazvina basa kuti unotaurirana nevanyanzvi vechokwadi, kunyangwe kubva kubhangi rako rekare. Chero zvazviri, usakanganise kuti muzvinabhizimisi wechokwadi inoda kudzidzisa uye nzwisisa mashandiro emusika wemasheya. Imomo mune nhema kiyi yekuunza kuzadzikiswa iwo mazano aunazvo muchikamu chekudyara. Izvo hazvina basa kuti ndeupi musika wauri kunongedza, asi zvinopesana, izvo zvinonyanya kukosha mhedzisiro yekushanda
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iyi nzira yekudyara inogara mukuti iyo dzidzo yemari Ndicho chombo chakanakisa chekuzvidzivirira kubva kuzviitiko zvingamuka kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, zvirinani kushandisa masvondo mashoma kana pamwe mwedzi mishoma kana zvichidikanwa kuti uite izvi zvakakosha. Nekuti zvirokwazvo, kana iwe ukapa yakakura tsika tsika, uchave unokwanisa kuwana zvirinani zvibodzwa mune ese mashandiro auchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Ichi chinhu chaunofanirwa kunge uine kubva ikozvino.
Chengetedza mari yausingade
Mumwe wemitemo yegoridhe kune vanotanga zvinoenderana nekufungidzira pamusoro pezvose kuti hapana sarudzo asi kuisa mari iyoyo haidi munguva pfupi. Nekuti unoisa panjodzi, kungaita mabasa anotyisa pamusika wemasheya kana, zvinopesana, kusiya maeuro mazhinji mumugwagwa nekuda kwezvaunoda iwe kuti uve nechengetedzo yehupfumi hwepamba. Kubva pamitero yemubhadharo kune iyo inotorwa kubva mukuchengetedza imba. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekugovera mari yese yausingade mune yakati rebei kana zvishoma zvine musoro kwenguva.
Kubva pane akajairika mamiriro, zvakakosha kuti iwe kambani inoshuma mauri kuda kuisa mari. Ziva huwandu hwako, mafambiro, makwikwi uye chero chimwe chinhu chakanyanya kukosha kana icho chinobatsira kufanotaura mashandiro emari yako. Mupfungwa iyi, ruzivo rwakanaka runogona kuve yakanakisa poindi yekutsigira kuzadzisa zvinangwa zvako zvakanyanya kana zvishoma nemazvo. Ndokunge, shure kwezvose, ndezvei nezve iwe kana iwe uchibhejera nemari yako wega. Chinhu chekufunga kuti iwe unofanirwa kuvimba neruzivo rwakanaka nezve misika yequity.
Ita zvinangwa zvishoma
Chero nzira, imwe ye mitemo yekutanga Kuti uwane zvinangwa zvako mumisika yezvemari, zvinowanzoitika nekuti pamusoro pezvose iwe unogadza zvinangwa zvekudyara uye wozotsanangura kana zviri nani kuti uteedzere mapfupi, epakati kana marefu-etemu nzira. Zvichienderana nezvinodiwa zvako semudhara mudiki uye wepakati nepakati uye kuti mune yega kesi ichave yakanyatsosiyana. Kusvika padanho rekuti imwe kana imwe nzira yekudyara inoda. Zvimwe kubva kune dzimwe nzira dzine hukasha kana nemitemo inodzivirira kana inochengetedza. Nekuti pakupera kwezuva unenge uri iwe waunosarudza.
Kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakanyanya ichave iyo nyaya yekuti iwe unofanirwa kudzidza kudzora ruzivo uye kuita sarudzo dzinozove dzakakosha kwazvo muhomwe yako. Mupfungwa iyi, unogona kutora ruzivo kubva kwakasiyana nzira dzekutaurirana. Kubva kune yakasarudzika midhiya mumisika yemari, masheya ma broker uyezve kubva kune akanyanya hunyanzvi ayo anofumurwa paInternet. Kubudikidza neyese iwo iwe unogona maneja yako yekudyara portfolio ine yakawanda yakawanda solvency kupfuura kusvika zvino. Nechinangwa chakakura chinogona kubatsira zvakanyanya kuita sarudzo dzakanyanya kukosha nezve izvo zvaunofanira kuita nemari yako. Chinhu chisiri nyore nguva dzose kuona kana kushandisa.
Mune imwe pfungwa kana imwe, varimari vanogona kusarudza kubva kwakasiyana siyana eruzhinji nzira kuti vazive chimiro chemari yavo zvichibva pane zvavanoda. Pakati payo inomira pamusoro peyese mukana we nyowani tekinoroji masevhisi kuti masangano emari anopa vatengi vavo nhasi. Nenzira yekuti kunyatsoteedzesa chikamu chega chega chekutengesera chinogona kuwanikwa kuburikidza navo kubva kugungwa bhawa kana pamwe kune imwe nzvimbo iri kure. Hapasisina miganho kuitira kuti ugone kushambadzira pamusika wemasheya kubva chero kupi pasi.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti nenzira yemamiro mirairo iwe unozogona kuzadzisa zvinangwa. Kusvika padanho rekuti vagadzirise nzvimbo dzekutenga pane imwe mutengo. Iwo ari nyore kwazvo kushandisa uye anotendera mushandisi kushandisa mazuva mashoma nerunyararo ruzere rwepfungwa kwavanoenda achiziva kuti yavo odha inomanikidzwa. Chero bedzi ivo vachisvika pamutengo watakapa kutengesa iwo masheya, ivo vanogona pamwe kupindirana, semuenzaniso, pamwe nedanho rekurwisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mazano ekutanga kuisa mari mumusika wemasheya
Ndezvipi zvinodzoserwa mogeji?
Misika inosimuka: ndeapi akanakisa kudyara mairi